Gudoomiyhii gobolka Hiiraan oo xilka laga qaaday iyo guddoomiye KMG ah oo la magacaabay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Gudoomiyhii gobolka Hiiraan oo xilka laga qaaday iyo guddoomiye KMG ah oo la magacaabay
Madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa maanta xil ka qaadis ku sameeyay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed), isagoona xilkaasi u magacaabay Cali Jeyte Cismaan.
Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegay inuu xilka ka qaadis ku sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed, islamarkaana uu si kumeel gaar ah xilkaasi ugu magacaabay Cali Jeyte Cismaan.
Guddomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan loo magacaabay Cali Jeyte Cismaan ayaa la sheegayaa inuu hore xildhibaan uga soo noqday dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya.
Ma jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan kasoo baxay guddoomiyihii gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Yuusuf Dabageed.
Madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa sidoo kale magacaabay guddi ka shaqeeya arrimaha nabad-gelyadda gobolka Hiiraan, wuxuuna guddigaan ka kooban yahay saraakiil ciidan.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay uu madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble uu xil ka qaadis ku sameeyo guddoomiye gobol, tan iyo markii xilka loo doortay 17-ka bishaan aynu ku jirno ee October.